Izinto ze-10 ozimele wazi ngaphambi kokuba uthathe i-DMAA | AASraw
/Blog/Ithala/ Izinto ze-10 ozimele wazi ngaphambi kokuba uthathe i-DMAA
ezaposwa ngomhla 11 / 28 / 2018 by UDkt Patrick Young bha liweyo Ithala.
I-DMAA isilwanyana esinokwenziwa ngokubambisana esinceda ekwakheni umzimba, ukutshiswa kwamafutha omzimba kunye nokuphucula imemori yexesha elifutshane kunye nesenzo esifanelekileyo. Eli nqaku liquka inzuzo yeDMAA kunye nemiphumo engenzekayo ye-1,3-dimethylamylamine.
ukuqonda Intoni is DMAA kufuneka kube yinto yezinto eziza kugxininiswa kuzo zonke iinjongo zokuphucula ukusebenza ngaphambi kokuba uhlawule ukusetyenziswa. I-DMAA eyona ifomu elifutshane lemveliso ye-chemical dimethylamylamine yinto ekholelwa ngaphambili ukuba iyicatshulwa kwioli yendalo yegeranium. Nangona kunjalo, ngokusebenzisa uphando, kuye kwasungulwa ukuba 1, 3 dimethylamylamine yenziwe ngokukwenziwa kwiibhubhoratri.
Kwakhona kuthiwa yi-1,3 DMAA, isilwanyana sichaza isakhiwo esifanayo kunye ne-germanium efunyenwe neziyobisi. Esi sizathu sokuba abantu abaninzi bacinga ukuba i-DMAA nayo iphinde ibe yiklasi elifanayo leziyobisi. I-DMAA yokupasa ukuqala ngaphambi kwexesha eli lifana nabantu abasebenzisa ukongezwa njengoko kusetyenziswa ikakhulu ngabo bafuna ukuqala ukwakha umzimba kunye neeseshoni zokusika.
I-DMAA powder yafakwa kuqala kwikarhwebo nguEli Lilly kunye nenkampani kwi-1944. Isilwanyana sasifumaneka kakhulu kusetyenziso lweyeza njengesiqhwala esasiswini. Isilwanyana sisetyenziselwe le njongo njengoko kufunyenwe ukunikela iziphumo ezifanayo ekusebenziseni i-ephedrine kunye ne-pseudoephedrin.
Ekuqaleni, abaninzi abantu bakholelwa ukuba i-DMAA ivela kwioli ye-geranium i-rose. Ngenxa yoko, kuqhelekile ukufumana iifemu ezininzi ezivelisa I-DMAA ebonisa imifanekiso yezityalo ze-rose geranium ezifana neengcambu kunye neziqu. Nangona kunjalo, nangona le nkolelo ihlala ixesha elide, iimvavanyo zelabhoratri kwi-DMAA zibonise ngenye indlela.
Kuye kwabonakaliswa ukuba i-DMAA ifunyenwe ngokweenkcukacha kwibhubhoratri kwaye akuyinto yendalo njengoko ikholelwa ngokude. Emva kokusungulwa kokuqala kwimarike, le nkunkuma yayithengiswa ngokugqithiseleyo njengoko abadlali bavakalisa iziphumo zayo. Oku bekude kube yi-1983 xa isongezelelo sisuswe kwikarhwebo.
Ukurhoxiswa kwabangelwa ngamabango ukuba akukhuselekanga ukuthengiswa kwii-pharmacy zikawonkewonke. Ukuvinjelwa kubangele ukusweleka kweziyobisi nakuba bekuthengiswa kwimarike emnyama. Ukuthengiswa komntu we-DMAA kwongezwa kwakhona kwi-2006 xa kuthengiswa phantsi kwegama elitsha, iGeranamine.
Umrhumo we-DMAA awuthengiswanga kuphela. Esikhundleni saloo nto, yayibandakanywa ekuveliseni ukulahleka kwesisindo kwaye yahlulwa njengesichengiso sokuphucula ukusebenza kwezemidlalo. Ukubuyiselwa kwakhona kweziyobisi kumakhemikhali aseburhulumenteni kuye kwafuna iingxabano ezingaphezulu malunga nokukhuselwa kokusetyenziswa kwintlethi yokuphucula ukusebenza.
Iinkxalabo ziye zabaluleke kakhulu kangangokuthi ulawulo lokutya kunye nezobisi (FDA) luye lwacela ukuba abavelisi bezongezelelo baqinisekise ukuba kufanelekile ukusetyenziswa ngaphandle kokubangela iziphumo eziphazamisayo. Amazwe afana neKhanada abuye akhulise iingxaki malunga nenjongo yalo, kwaye ivaliwe.
Akukhuselekile ukusetyenziswa ngabadlali abakhuphisanayo njengo-2010, kunye ne-Arhente ye-Anti-Doping Agency esandula ukuyibhala njengemveliso enobungozi engavumelekanga ukuyisebenzisa. Ngako oko, umgijimi ofunyenweyo ukuba usebenzisa isicatshulwa kakhulu ukuba avalwe ukuba athathe inxaxheba kwimidlalo yokhuphiswano. Ngenxa yeengxabano ezixhomekeke ekusebenziseni kwayo, i-DMAA inqatshelwe kwimikhosi yaseMelika.
Ukongezwa kuye kwasuswa kwizinto zokugcina izithuthi ukuze zilawulwe. E-New Zealand, ukusetyenziswa kwesi sidakamizwa akuvumelekanga. Kwakhona kuthathwa njengento engekho mthethweni e-United States ngoku.
Yintoni eyenziwa yi-DMAA?
Indlela yokusebenza eyiyo, i-DMAA ayizange iboniswe. Nangona kunjalo, isicatshulwa kucingelwa ukulinganisa intshukumo ye-adrenaline yemvelo. Emva kokusetyenziswa, i-DMAA ichaphazela ngqo inkqubo ye-nervous central.
Isilwanyana saziwa ukuvelisa ukuphakamisa okukhulu okufana nokusetyenziswa kwe-caffeine. Nangona kunjalo, imo yezenzo ze-DMAA ihluke kwi-caffeine. Xa kuthathwa, i-DMAA ibangela ukuveliswa kwe-noradrenaline eyimodemoni eyenziwa ngexesha loxinzelelo okanye ukwesaba.
I-hormone idibeneyo kwiingqungquthela ze-adrenal ezifumaneka nje ngaphezu kweentso. Emva kokukhululwa, i-hormone isasazwa kwigazi, kwaye oku kubangela ukwanda kwenani lentliziyo.
Ukuveliswa kwe-noradrenaline kukhuthaza kwakhona inkqubo yomzimba ukukhupha i-glucose kwi-glycogen reserves. Oku kuholele ekuphuculeni kwamandla emzimbeni emiswini yomzimba, kwaye yile nto abadlali abaninzi abanqwenela ngayo ngaphambi kokuzivocavoca. Ukusetyenziswa kwe-DMAA kuya kubakho ekuphuculeni kwezinye iinkalo ezifana nokulumkisa, ukukhuthazwa kunye nokuphendula kwangoku.
Le ngenye yezizathu eziphambili zokuba kungani i-DMAA isetyenziswa kakhulu ngabadlali ngaphambi kokuba iqalise iseshoni yokuzonwabisa. Isilwanyana sidlulisa umuzwa wamandla aphezulu ukwenza umdlali ufuna ukubandakanya umsebenzi oza kudla amandla angaphezulu. Ukusetyenziswa kwe-DMAA kuye kwalondoloza abadlali abava kwivakalelo eziqhelekileyo zamandla eziza kunye nezenzo zokusebenzisa i-caffeine.
I-DMAA kukuphuculwa kwe-caffeine, kwaye abo bawusebenzisa ixesha elide bangaqala ukuphuhlisa umlutha. Oku kuthetha ukuba ukusetyenziswa okulawulwayo kuyimfuneko. Xa zisetyenzisiwe, kubangela ukuba ingqondo iqhube umvakalelo wokukhulisa amandla amakhulu.
Ukuphakama okuphezulu kwexinzelelo lwegazi kuhamba oku. Ngenxa yolu hlobo lwesenzo, abantu abaninzi banokuxhaphaza izidakamizwa. Nangona kunjalo, abanye abagijimi basebenzisa isibisi ngeenjongo ezakhayo emzimbeni wabo. Ezi zilandelayo zisebenzise kakuhle i-DMAA:
1. Ukuvutha kwamafutha
Ngokuqhelekileyo, umzimba uyavutha ngokwemvelo amafutha angaphezulu. Nangona kunjalo, oku kuya kwenzeka kwinqanaba elincinci kunezinto ezinqwenelekayo. Ukukhawulezisa inkqubo yokusetyenziswa kwezibonelelo zamukelwe ngabadlali abaphumelelayo. Ininzi yalezi zongezelelo ziyi-steroids ezifana Nootropics.
Ukusetyenziswa kwezibonelelo ezinjalo kuphucula ngokwaneleyo izinga lokutshisa. I-DMAA isebenza ngendlela efanayo nezinye izongezo eziyaziwayo ekutshiseni kwamafutha angaphezulu. Iiseshoni ezininzi zokufunda zenzelwe ukuphumeza iziphumo ezininzi, intloko phakathi kwabo kukunciphisa amafutha omzimba ogqithiseleyo anikezela umzimba isikhalazo esingathandekiyo.
Amafutha angaphezulu abeka umngcipheko kwimpilo yomdlali njengoko imeko enjalo inokunceda ukukhuselwa kweemvini zegazi. Xa oko kwenzeka, kuya kuba nokuhamba okungapheli kwe-oksijini egazini kwaye umsebenzi oqhelekileyo womntu ngamnye uya kubachaphazeleka kakhulu. Ngoku inqakrazo yokuphepha loo meko kukusetyenziswa kweziyobisi ezifana ne-DMAA enika umzimba wakho ngamanqanaba aphezulu.
Xa unamandla, umsebenzisi ukhathaza ukubandakanya kwimisebenzi eya kudla amandla, kwaye ngenxa yoko, kuya kuba nokunciphisa amafutha omzimba onobungozi nabangathandekiyo. Isizabisi sitholakale sisebenza kakuhle ekutshiseni kwamafutha omzimba , kwaye oku kubalulekile kubadlali abafuna ukufezekisa oku ngokukodwa ngexesha lokunciphisa i-offseason. Ukusebenza kwechiza kukuphelelanga.
Xa kuhlanganiswe ne-stimulant efana ne-caffeine, i-DMAA ifunyenwe ukuphucula umzimba womzimba ngokumalunga ne-35%. Oku, kunceda ekuphuculeni izinga lokutshisa amafutha ngamanqaku amakhulu. Isilwanyana sisebenza ngokuqinisekisa ukuba kudala ukutshisa kwamafutha ngaphambili ngaphambi kokuba umzimba utyhobole ukuba uvele ngokwemvelo.
Njengoko isenzo se-DMAA sisondele ngqo kwinkqubo yesantya, inkunkuma iyaqinisekisa ukuba ibangela ukuba isenzo sisithwe ngokukhawuleza. Ekuvuseleleni, i-CNS iphendulela ngokunyusa iimpendulo zechunge ezenza ukutshisa ioli. Ngako oko, kuya kuba nefanelekileyo ukuthelekisa isenzo se-DMAA kunye nezinye izongezelelo zokutshisa izitye kwiimarike.
2. Isakhiwo sokwakha
Into ebaluleke kakhulu ngaphambi kokuba usebenze ngamandla. Yingakho kufuneka ukhangele oko kukunokukunika ezi zixhobo zamandla ukuze uqhubeke. I-Mesomorph yokuqala yokufunda
yinto enjani ukunika umakhi womzimba intloko efanelekileyo yokuqala oyifunayo ukuze wenze umsebenzi wakho uphumelele.
Njengoko kuthethwa ngaphambili, isizaziso saziwa ngokubonelela ngemiphumo efana ne-pseudoephedrine. Esi sidakamizwa siya kufumana umsebenzisi 'kwimodi'. Oku kunika omnye ngesibonelelo esikhulu samandla esilungele ukwenziwa komzimba.
Ukufumana iziphumo ezilungileyo, isiza esinika amandla aphezulu kufuneka sithathwe ngaphambi kweseshoni yokufunda. Oku kuya kutyumba umsebenzisi ngamanzi ombane okuyiyo yonke into abadlali abaphucula ngayo yokusebenza ukuba baqalise iintsuku zabo kwi-note ephezulu. Isilwanyana esinjalo senza oku ngokuchaphazela enye yeenkqubo zendalo zomzimba.
Emva kokungeniswa, isilwanyana siphucula uhlaselo lwe-vasodilation. Le yinkqubo eyenzeka ngokuqhelekileyo xa kukho ukushisa okukhulu ngokwemoya. Umzimba uphendula ngokunyusa ubungakanani beemvini. Oku kuthetha ukuletha igazi elingaphezulu kwesikhumba ukuze kupholile.
Uninzi lweziyobisi eziphucula ukusebenza ziqukethe i-nitric oxide ekhuthaza ukwandiswa kwemithambo yegazi ngokusebenzisa i-vasodilation eyenziweyo. Le yintsimi eyongeziweyo kumdlali, ngokukodwa ngexesha ngaphambi kokufunda. Xa kuninzi, indawo yokuphatha igazi ephezulu ikhuliswa kakhulu.
Oku kuya kunika umdlali ngesibonelelo sokunyakaza kwegazi okungakaze kube khona ngaphambi kokusetyenziswa kweziyobisi. Emva koko, uqeqesho olunzulu lunokwenzeka, kwaye umgijimi unamandla amaninzi okukhuthaza ukuphuhliswa kwemisipha.
Nangona kunjalo, ukusetyenziswa kwe-DMAA kule ntlawulo kuye kwafunyaniswa kukuchasene nento abantu abaninzi abanokuyilindela malunga nesistim sokuphucula ukusebenza. Esikhundleni sokuphucula i-vasodilation njengamachiza amaninzi e-nitric, i-DMAA yenza into eyahlukileyo. Yibangela i-vasoconstriction eqhelekileyo ngamaxesha apho amaqondo okushisa emoyeni aphantsi.
Ngelo xesha, umzimba uyabalazela ukugcina ubushushu bawo, kwaye oku kubangelwa ukurhoxiswa kwegazi ukusuka kwesikhumba. Oku kunjalo, kwenzeka xa i-dosage iphezulu kakhulu kwaye akufanele ibe yinkxalabo kumntu oceba ukuthabatha i-DMAA.
3. Inceda ekuphuculeni imemori yesikhashana kunye nesenzo se-reflex
Wonke umntu uya kuthanda ukukhumbula yonke into ayifunayo. Nangona kunjalo, oku akuqhelekanga kwimeko yokuba ubomi bebantu buhlangene neziganeko ezininzi ezenza kube nzima ukuba oku kwenzeke. I-DMAA ingaba yongezelelo elincedo kule nto.
Izifundo ezenziwe ngabasebenzisi beli galelo zityhile ukuba abo babandakanyekayo babenememori encinci yexesha elifutshane kunokuba lisebenzise. Ngako oko, nangona abantu abaninzi beza kuthatha iilisi ngenjongo yokufezekisa oku, kuza kuza nje ngefuthe lokusetyenziswa kwayo. Yaye yile enye yezinto eziphambili ezivuna abantu abaninzi ekusebenziseni i-DMAA nokuba oko kwenzeka ngaphandle kokucwangcisa.
Isenzo esiphezulu se-reflex sisisigxina abadlali abaninzi abanqwenela ukufumana. Ukusetyenziswa kwe-DMAA kubangela ukuba umzimba uqaphele kakhulu, kwaye oku kuphucula ukusebenza kobuchule. Oku kuthetha ukuba abasebenzisi be-DMAA bayasebenza ngakumbi ngexesha lokwakha umzimba okanye kukhuphiswano. Isilwanyana sisebenza ngokuphucula izinga lomzimba we-metabolism.
Oku kubangela ukuba iinkqubo zomzimba zenzeke ngezinga elikhawulezayo kunexesha eliqhelekileyo. Oku kuboniswe ngokomzimba ngokuba nomntu osebenzayo kwaye uqaphele. Nangona kunjalo, i-blot kuphela kulo mbandela othile kukuba ukusetyenziswa kweziyobisi kwimincintiswano akuvumelekile.
Ngoko ke, ukusetyenziswa kwayo ukuphucula isenzo se-reflex ngexesha lezemidlalo akuvunyelwe. Kodwa kusenokwenzeka ukuba kusetyenziswe ngabadlali ngexesha lokusasaza ukuphumeza ukuqhuma nokuphucula isantya.
Ngaba i-DMAA izongezelelo ezikhuselekileyo?
Oku kufuneka kukuxhalaba nabani na abathatha inxaxheba kwimidlalo yokhuphiswano. Isilwanyana sele sibalwe phakathi kweziyobisi ezingakhuselekanga ukuba zisetyenziswe ngumbutho wehlabathi wokudibana. Amanye amaninzi amaninzi anqande ukusetyenziswa kwe-DMAA kwimimandla ethile. Nangona kunjalo, esi sihloko esiye safumana iimbono ezihlukeneyo.
I-Arhente ye-United States Yokutya Nezobisi (i-FDA) ijonga ukuba i-DMAA isongezelelo sokukhuseleka kokusetyenziswa komntu. I-arhente igxininisa ukuba akukho nkcazelo malunga nokusebenza kwe-DMAA efanelekileyo ukuba ibe yiziyobisi ezikhuselekileyo zokusetyenziswa. Kwiwebhsayithi ye-arhente, umzimba ucebisa abantu ukuba baphephe ukusebenzisa izidakamizwa kuzo zonke iindleko njengoko kukwazi ukubeka engozini yeengozi zempilo.
Enye yeengxaki eziphambili ze-FDA kukuba amandla okwenza izidakamizwa zenze i-vasoconstriction. Oku baphikisanayo ngumphambili wexinzelelo lwegazi oluphezulu ekugqibeleni unokukhokelela ekufeni ukuba awuyi kuthathwa ngokukhawuleza. Ezinye iziphumo zokuphefumula eziza kuba namava kunye nokusetyenziswa kwe-DMAA ziquka ubunzima bokuphefumula, ukuhlaselwa kwentliziyo kunye nobuhle obukhulu bokubanjwa.
Ngokutsho kwe-FDA, ukusetyenziswa kwesi sidakamizwa kuya kubangela ukuphazamiseka kweengxaki njengoko kusebenza ngokubangela ukuba inkqubo ye-nervous central isebenze. Oku kunokuba yingozi njengoko kunokubangela ukukhubazeka kunye nezinye iingxaki ezibulalayo.
I-FDA iye yaqina kakhulu ekuqinisekiseni ukuba i-DMAA equkethe isongezelelo isuswa kwiimarike ngokupheleleyo. Okubalulekileyo phakathi kwamanyathelo ahlukeneyo abaye bawenzayo ukukhupha iikhemikhali zezilwanyana kunye neencwadi ezibavuselela ekuthengiseni i-DMAA equkethe izongezelelo. Ukuba zenzeka ukuba zifumane izibonelelo ezinjalo kwiishelulo, i-arhente icela abathengisi ukuba babatshabalalise kwaye bayeke ukwenza olunye umyalelo kubakhiqizi.
Kuze kube ngoku, iifemu ezininzi ziye zavumelana. Eli phulo liqaliswe kwi-2012, kwaye liye lathatha ngokupheleleyo njengoko kukho ukuthengiswa okuphantsi kweDMAA. Kwakhona kukho iimeko apho ezinye iifemu ziqhubeka nokuvelisa i-DMAA nangemva kokuba zicelwe ukuba zime nge-FDA.
Amatyala anjalo afunyanwe kwi-2013 xa iqumrhu elibizwa ngokuba yi-USPLabs liyekile ukuyeka ukuvelisa izongezelelo. I-FDA imise ukusebenza kwayo, kwaye iqumrhu elikulo mbuzo lalinokutshabalalisa iimveliso ezazisesekhoyo kwimarike. Ixabiso lazo lokuthengisa elithengiswayo lali malunga ne-8 yezigidi.
Oku kubonisa ukuba i-arhente ikulungele ukuhamba kangakanani ukuqinisekisa ukuqinisekisa ukuba ukuveliswa kwe-DMAA isilumkiso kwaye akukho nkunkuma enye ifumana indlela eya kubemi belizwe. I-FDA iye yaqhubeka inyathelo kwaye iluhlu lwamagama ahlukeneyo abenzi bokusebenza abangayisebenzisa ukukhusela abathengi ukuba bazi ukuba bayadla i-DMAA. Oku kwakuba emva kokuba i-ejensi yaqaphela ukuba iinkampani ezininzi zivelisa iilisi ngamagama adibeneyo ukukhusela abathengi ukuba baqaphele ngokuchanekileyo isicatshulwa esivinjelwe.
Amanye amagama angabamnyama abandakanya iGeranamine kunye neMethhylhexanamine. Ezinye iinkampani zibonisa ukuba isongezelelo siqulethe izicatshulwa zeGeranium. Esi sibonakaliso sokuba khona kwe-DMAA. I-FDA ilumkisa abathengi ukuba baqaphele nayiphi na isongezelelo esinezicatshulwa zaseGeranium.
Imiqobo ifana namanye amazwe afana neKhanada neNew Zealand kunye nabanye abaninzi kwihlabathi. Ukukhathazeka ngokukodwa kuzo zonke iziphumo zayo kwindlela yokuphefumula. I-agency ye-anti-doping agency iye yabhala DMAA powder phakathi kweziyobisi ezingakhuselekanga ukusetyenziswa kwabantu. Oku kuthetha ukuba kuvalwe ukusetyenziswa kwabadlali abachaphazelekayo kwimincintiswano efana neNdebe yeHlabathi.
Nangona kunjalo kuvunyelwe ukuba kusetyenziswe kwamanye amancintiswano ngokukodwa kumayeza aphantsi aphakathi kwamanqanaba avunyelweyo. Nangona kunjalo, kusoloko kulungile ukuqiniseka malunga nemingcipheko yokhuphiswano othabatha inxaxheba ngaphambi kokuba athathe isilwanyana ukuze agweme ukufika kwiinkathazo.
Isihloko sokuba ingaba i-DMAA ikhuselekile yathatha enye i-twist emva kwamacala athile phakathi kwe-FDA kunye nezinye iinkampani. Ezi nkampani zaqhubeka zatsho ukuba akukho nto eyingozi malunga nokuthengisa i-narcotic supplement. Olunye uphando lunike ukuba i-DMAA yayiyimveliso yesityalo saseGeranium kwaye le nto yayichaswa yi-FDA.
Nangona kunjalo, i-arhente ayinikanga naliphi na ubungqina obuxhasayo ukubuyisela amabango ayo ukuba le nkunkuma yayifumaneka ngokufanelekileyo. Ngokwegqirha ophanda ngamabango okungaxhaswanga kokusebenzisa isongezelelo, akukho miphumo emibi ekulindelwe kumntu oqhelekileyo osebenzisa isongezelelo ngokuchanekileyo. Amachiza athetha ukuba inani le-DMAA efunyenwe kwi-supplementary pre-workout yayingaphantsi kwezinto ezithathwa njengetshefu ekusebenziseni abantu.
Kwesinye ipererelo, abantu abatsha abasebenzisa i-DMAA njengento ekhuthazayo ngexesha lamapolisa bafunyenwe ukuhlalisa isifo esifanayo, isifo sobungozi. Oku kwaqinisa ngakumbi ibango le-FDA malunga nokukhuselwa kokusebenzisa i-DMAA kwizibonelelo. Nangona kunjalo, uphando olwenziwe lugqithise ubungqina obuxhasa u-FDA emva kokufunyaniswa ukuba abantu abatsha abasemthethweni basebenzise umlinganiselo ophezulu kakhulu weziyobisi.
Kwaye kwafunyanwa ukuba bathathe iipilisi eziqulethwe nganye kwi-600mg yezinto ezisetyenziswayo. Oku kwakuphakamileyo kwimeko eqhelekileyo, kwaye inani elilindelekileyo lijikeleze i-60mg kwelinye ipilisi yokuncedisa. Oku kuthetha ukuba aba bantu abatsha badla ngokuphindwe kwezihlandlo ezilishumi.
Ngokucacileyo, ukusuka kwinqanaba lezesayensi, isicatshulwa sinokuthathwa njengesiqhelo esilungeleyo sokusebenza ngaphambi kokuba izidakamizwa ezifanelekileyo zithathwe. Ukuba i-DMAA ithathwa kumaqondo aphezulu kune-75mg, kunamathuba okuphakama kwengcinezelo yegazi kumanqanaba angafunekiyo, kwaye ngoko ke kufuneka kucatshangelwe. Isiza kufuneka sisetyenziswe ngabantu abangenawo umlando wexinzelelo lwegazi oludlulileyo njengoko ukusetyenziswa kwayo kungalimaza imeko.
Kwakhona, nangona i-FDA ingavumelekanga kwiinkampani ezininzi ezivelisa iziyobisi, zinendawo malunga nokukhuselwa kwe-DMAA. Ngoko ke akucebisi ukuba bahlaziye izinto ezixhalabisa kwaye baqhubeke nokuthenga izongezelelo kumashishini abamnyama. Ukubonisana nodokotela ngaphambi kokusetyenziswa kwe-DMAA ngaphambi kokufunda umfowuni kuyimfuneko.
Oku kuya kuqinisekisa ukuba iziphumo ezifunwayo zifezekiswa ngaphandle kokukhupha ukhuseleko lwezempilo lomsebenzisi.
Yintoni oyifunayo ukuba wazi ngaphambi kokuthatha i-DMAA supplements?
Kukho amaqela amaninzi ukuba nayiphi i-athlete yokuphucula ukusebenza kufuneka ihambisane nayo ngaphambi kokuba ihlelwe phantsi kwi-DMAA njengesixhobo sokuqala sokusebenza. Ezinye zezinto ziquka iziphumo ezichaphazelekayo eziza kuhlangana nazo kunye neenzuzo oza kuzivuna ekusebenziseni kwayo.
Iiprayimari phakathi kwezinto ofuna ukuzazi kukuba imiphumo yokusebenzisa le mveliso ifana neyinto enokuyenza emva kokusetyenziswa kwe-cocaine kunye ne-methamphetamine. Oku kuthetha ukuba amathuba okuphuhlisa umlutha kakhulu kakhulu njengoko ephakamileyo phakathi kwezona zivuselelekayo ezinamandla. Kufuneka uqaphele ukuba unokuvula umzimba wakho kwenye yezilingo ezinamandla kunokuba uzama ukuphucula ukusebenza kwakho.
Ukuze ugweme amathuba okulutha, kufuneka uqinisekise ukuba ulandele ngokunyanisekileyo oko ugqirha wakho akholelwa ukuba lukhuselekileyo kwimpilo yakho. Kwakhona kuyimfuneko ukuqonda ukuba ukusetyenziswa kweziyobisi kuya kuba nefuthe kwinkqubo ye-nervous central ngqo. I-DMAA yenza into efanayo ne-caffeine ngokunciphisa izinga lokufumana i-CNS eyenza umzimba wakho uqaphile.
Isiza sinamandla kunokwenza i-caffeine kwaye iya kunika umzimba wakho amandla okutshintsha okufuneka ukuba uqale iseshoni yakho yokuzivocavoca kwinqaku eliphezulu. Ngoko ke kubalulekile kwakhona ukujonga umyinge owudlayo njengokuba iziyobisi zichaphazela ngokuthe ngqo enye yeengxenye zomzimba ezibuhlungu. Kwimeko echazwe kwi-2012, iqela labantu abatsha lisetyenziswe ekusebenziseni iziyobisi ngexesha leseshoni.
Zidla izihlandlo ezilishumi ngaphezu kwezinto eziyimfuneko kwisilinganiso esisodwa sexesha. Injongo yayikukuba 'iphakame' ngokukhawuleza, kwaye oku kuguqulwa. Isilwanyana sichaphazele inkqubo yaso ye-nervous, kwaye ezininzi zafunyanwa zine-cerebral stroke egulo lokugula.
Abasebenzisi nabo bafanele baqonde ukuba ngokungafani nezinye izinto ezongezelelweyo zokuqala zokufunda eziqukethe i-nitric oxide, i-DMAA ibangele i-vasoconstriction yeethambo. Oku kuthetha ukuba umntu othabathe iipilisi ze-DMAA uya kubalahla imithana yegazi kunomnye ongenalo. Le meko ingaba yingozi xa kwenzeka kumntu onenkinga yokunyuka kwengcinezelo yegazi njengoko kunokwenzeka ukunyusa ubunzima besifo.
Ngoko ke, umntu ojongene nengcinezelo yegazi kufuneka aphephe ukusebenzisa iDMAA.
Ukusetyenziswa kwesi sidakamizwa kunokubangela ukunyuka kwegazi kunye nokuvakalelwa kwamandla aphezulu. Ukudibanisa ukuxhaswa kunye nezinye izidakamizwa eziphuculayo zinokuyingozi njengoko oku kunokubangela ukuba umzimba wakho ube namandla amakhulu ongenakukwazi ukuphatha. Kuyacetyiswa ukuba uqonde ukuba i-DMAA ngokuyinhloko isongezelelo sokuqala komsebenzi ongasetyenziselwa nayiphi na injongo.
Abanye abantu baye bawasebenzisa njengezidakamizwa zokuphucula ngokwesini, kodwa oku kuphosakeleyo. Ingakhokelela ekugqibeleni ukuya kwi-coma xa uxhatshazwa kwaye oku kufuneka kuhlale kuqwalaselwa ngexesha lokusetyenziswa.
DMAA kuqala kunye neziphumo zangaphambili zokusebenza
Emva kokusetyenziswa kwe-DMAA, abanye abantu baye bafumana iimpembelelo zangaphambili zokusebenza ezibandakanya ukuncwina nokuhlanza. Oku kuyinto eqhelekileyo, kwaye ithetha ukuba umzimba wakho mhlawumbi uyasabela kakubi kwiziyobisi. Nangona kunjalo, ukuhlanza kunye neentlanzi kusenokungabi kubangelwa ngqo yi-DMAA. Ikhemikhali iqulethwe kwizibonelelo ezinezinye izakhiwo, kwaye nazo zingabangela izihlanza.
Ngaphandle koko, ezinye iimpembelelo zangaphambi kokusebenza ziqhelekileyo kunye nokusetyenziswa kwezikhuthazo ezifana ne-DMAA. Ezi zinto ziquka:
Izibonelelo ezininzi ziza kunye nokuhlelwa kwabantu abaxolelwe ukusetyenziswa, kwaye okubalulekileyo phakathi kwabo kubandakanya oomama kunye nabakhulelwe. Isizathu esilandelayo kukuba, kwimeko yabasetyhini abakhulelweyo, ukusebenzisa iziyobisi kunokwenzeka ukuba kuthintele ukuphuhliswa kwengane engakazalwa. Nangona kunjalo, nangona ulwazi oluninzi lufumaneka malunga nokusetyenziswa kwamanyathelo amaninzi kumaqela athile ahlukeneyo, oku akunjalo nakwizidakamizwa zangaphambili ze-DMAA.
Kukhona ulwazi oluninzi malunga nalokhu. Ngako oko, abo banenjongo yokusebenzisa i-DMAA njenge-drug pre-workout kwaye bayakhulelwa okanye baqeshwe kufuneka babaleke ukwenza njalo njengoko kunenkcazelo encinane malunga nemiphumo engalindelekileyo. Le nto iya kuba yindlela ekhuselekileyo kunokuba isetyenziswe ngumsebenzisi kwimiphumo engazange icinga ngayo.
Isidakamizwa se-DMAA sichazwa njengento ekhuthazayo. Oku kuthetha ukuba kunokwenzeka ukuba kuthintele ingozi yokuhlinzwa ngokukhuselekileyo ngakumbi xa kuthathwa nje ngaphambi kokusebenza. Ngoko ke ukuphepha loo meko, kucetyiswa ukuba ungayisebenzisi ukuba uyasetyenzwa ukuhlinzwa.
Kucetyiswa ukuba ungathathi nantoni na evuselelayo phambi kokuhlinzwa. Oku kukuphepha ukhuseleko oluphezulu lwegazi oluya kubulala ngexesha lotyando.
Esi sisona siphumo esicacileyo ngakumbi sichaphazelekayo nabantu abasebenzisa i-DMAA. Oku kungenxa yokuba leziyobisi zivuselela kwaye ezininzi iziyobisi zifundiswa ukuba zenze umfutho wegazi ophezulu ngakumbi xa uxhatshazwa. I-DMAA ikhokelela ekunciphiseni imithana yegazi, kwaye oku kubangela ukuba igazi liqhume kwizinga elikhawulezayo kunexesha eliqhelekileyo elibangelwa uxinzelelo lwegazi oluphezulu.
Ngenxa yempembelelo ecaleni, ukusetyenziswa kwe-DMAA kuye kwafunyanwa kubangela ezinye izifo ezimbi njenge-stroke ye-cerebral. Kwimeko yolu phawu, umsebenzisi makabeke ukusebenzisa le nkunkuma ngokukhawuleza. Oku kungenxa yokuba ukusetyenziswa kwayo okuqhubekayo kunokwandisa iimpawu kwaye kunokukhokelela ekufeni.
Nangona kunjalo, kunokwenzeka ukukhusela uxinzelelo oluphezulu lwegazi ngokusebenzisa ukusetyenziswa okulawulwayo. Oku kuya kunika iziphumo ezintle ukuba ziququzelelwe ngamayeza azakufumana iimvavanyo ukuqinisekisa ukuba imilinganiselo efanele.
I-DMAA ihlala ixesha elingakanani kwinkqubo yakho?
Indlela eqhelekileyo yokulawulwa kwe-DMAA ingomlomo. Xa kuthatyathwa ngale ndlela, isicatshulwa siya kuthatha imizuzu engama-8 ukuba ungene kwigazi lomthengi. Nangona kunjalo, imiphumo ayiyi kuvakalelwa ngokukhawuleza njengoko uninzi lwamachiza lunaloo nto ebizwa ngokuba ngumlinganiselo wesigamu. Eli lixesha elifunekayo ukuba isicatshulwa sidibanise kwaye sikhululwe izithako ezisebenzayo emzimbeni ukuze zisetyenziswe.
Isiqingatha-ubomi se-DMAA malunga neeyure ze-8. Ngako oko, umntu ozimisele ukunyusa umzimba wakhe ngaphambi kweseshoni yokufunda kufuneka athathe iilesi ze-8 iiyure ngaphambi kokuba anike ixesha elaneleyo lokuba isilwanyana singene emzimbeni.
Emva kokusetyenziswa kwesi sidakamizwa, ukuvakalelwa ngokuqhelekileyo kokuphakamileyo kunamava. Ngokuqhelekileyo, oku akusiyo ivakalelwa kukuba abaninzi abantu bangathanda ukufumana lonke ixesha ngelixa bengasebenzi. Ngoko ke, kukho isidingo sokwazi ukuba yeyiphi ixesha elithatyathwe yilezi ziza kukhutshwa emzimbeni emva kokusetyenziswa.
Ngokomyinge, le nkunkuma igcinwa emzimbeni malunga neyure le-24-eyure emva koko iimvakalelo zingasenayo.
Mhlawumbi, uvile iintlobo ezininzi kunye neengxelo malunga nokukwazi kwe-DMAA ekulahlekeni kwesisindo kwaye ungathanda ukwazi ukuba yiyiphi enye into eqondakalayo. Eyona nto into yokuba i-DMAA isongezelelo ingakunceda ukuba uchithe ubuninzi bobunzima ngezindlela ezahlukeneyo.
Okokuqala, isongezelelo seDemethylamylamine sinokukunceda ukuba ugxininise ukugxila kunye nezizathu ekunyuseni ukunyamezela kwakho intlungu namandla. Ukunyuka kwamandla kunye nokunyamezela intlungu kuya kukunceda ukuba uqeqeshe ngokuphumelelayo uqeqesho lokulahlekelwa kwesisindo.
Xa kuziwa ekutshiseni kwamafutha omzimba, i-1 3 i-Dimethylamylamine yenye yezona zinto zivelele kakhulu ezitshisa i-fatmogenic. Njengoko uninzi lwamafutha ahloniphekileyo asebenzayo, i-DMAA ibangela ukutshiswa kwamafutha ngokukhawuleza kwimeko eqhelekileyo kwimeko apho ukutsha kwamafutha akunakwenzeka ukuba kwenzeke.
Ngaba uyazibuza yintoni eyenza i-dmaa ukutshisa amafutha emzimbeni wakho?
Ewe, i-DMAA ikhulisa amandla akho ngokusebenzisa i-vasoconstriction, inkqubo equka ukuthintela ukuhamba kwegazi lakho. Ukuhamba kwegazi okukhawulelweyo kubangela ukukhula kwemisipha kunye nokuvuselela imisipha. Ngaloo ndlela, ukukhula kwemetabolism kukunyuka, okukhokelela ekutshiseni ngokukhawuleza nangokugqithiseleyo kwamafutha omzimba.
Izakhiwo ze-DMAA, i-ephedrin kunye ne-amphetamines zikwabelana ngokufanayo. Ngaloo ndlela, i-DMAA ingakhuthaza inkqubo yesistim yomntu, ebangela ukuba ingqondo ikhulule i-norepinephrin. Kwakhona, yenza ukuba i-alpha's and beta receptors yomzimba zenze ukwenziwa komsebenzi we-noradrenaline, ngenxa yoko ivuselela inkqubo ye-adrenergic receptor ngqo.
Ukuhlanganiswa kwezi zenzo zombini kubangela ukwanda kwinqanaba lomzimba kunye nokuphulwa kwamathambo e-adipose tissue ukuvelisa amandla-le nkqubo ibizwa ngokuba yi-lipolysis.
Isiphumo se-DMAA sinokunyuka kakhulu xa sisetyenziswa kunye nezinye izithako ezikhuthazayo ezifana ne-caffeine.
Ukuba zisetyenziselwa kunye ne-caffeine, umphumo we-DMAA kwizinga lokunciphisa umzimba likhuphuka ngo-35% ngelixa i-fat burning efficiency iyanda ngaphezu kwe-169%.
Kuphando olutshanje oluqhutyelwe ukuphanda ukusebenza kwe-DMAA ekutshiseni kwamafutha, abadala be-32 abanempilo ababephethe i-capsule enye yokunyusa kwayo imihla ngemihla kwiintsuku ze-14 bafumana ukulahleka okukhulu kweoli.
Imiphumo emibi ye-DMAA
Njengawo nawuphi na omnye umuthi, i-DMAA inokuba nemiphumo emibi xa iphathwa kakubi. Nazi ezinye zezinto ezinokwenzeka Iziphumo zecala leDMAA:
1. Isifo se-cerebral haemorrhage
Nangona kungekho bungqina obudibanisa i-DMAA ngqo kwi-haemorrhage ye-cerebral, kukho imeko echazwe ngumntu owaphuhlisa imeko emva kokuthatha utywala olunamandla kunye ne-DMAA mix mix. Nangona kunjalo, kubalulekile ukuba uqaphele ukuba i-DMAA ayifanele isetyenziswe kunye notywala ngaphandle koko loo mpembelelo wecala unokuthi uphumelele.
Umsebenzi oyintloko wesibindi kukucoca igazi legazi lokugaya ngaphambi kokuvumela ukuba lidlulele kwezinye iindawo zomzimba. Ngaphandle koko, isibindi sichaza izidakamizwa kwaye sidibanisa neekhemikhali.
Xa uthatha i-DMAA ipilisi okanye isongezelelo, isibindi kufuneka sibhekane nesithako sesilwanyana / isongezelelo. Ngenxa yoko, isibindi sinokufumana i-enzyme build-up ekwazi ukuphela ibe yingozi. Isilwayo sinokubangela ukuba ukutshaya kwesibindi kunokubangela ukuba umonakalo wesibindi okanye unqabile.
3. Igazi elonyukayo
Xa sicinga ukuba kuyishukumisayo, iDemethylamylamine inokunyusa uxinzelelo lwegazi. Ngaloo ndlela, abantu abaneengcinezelo zegazi eziphezulu kufuneka bakuphephe ukuthabatha izilwanyana okanye izongezo eziqukethe.
4. Intliziyo engavumelekanga (intliziyo ye-arrhythmia)
Nangona kunqabile, umphumo oshukumisayo we-DMAA unokukhokelela ekubetheni intliziyo ngokukhawuleza kwaye oku kungonakalisa i-arrhythmias yenhliziyo kubantu abajongene nesimo. Ngoko ke, ukuba uhleliwe ukuhlinzwa, uyacetyiswa ukuba ungathathi i-DMAA ezimbini kwiiveki ngaphambi komhla wokusebenza, ngaphandle koko, ukwanda kwengcinezelo yegazi kunye nentliziyo engavumelekanga ngenxa yempembelelo inokuphazamisa ukusebenza.
Kwisifundo esenziwe ukwenza uphando ngemiphumo ye-DMAA, iziphumo zibonise ukuba abadala be-12 abanempilo ngabanye abaye badla iifomsile ezimbini ze-OxyELITE Pro, isongezelelo sokutya esiqukethe i-Dimethylamylamine, sinokunyuka kwentliziyo kunye nokuphakanyiswa kwegazi.
Nangona kunjalo, abantu abadala abasibhozo abasempilweni abathatha i-25 mg dose ye-DMAA babenomlinganiselo oqhelekileyo wenhliziyo kunye noxinzelelo lwegazi nangona emva kokuthatha iziyobisi. Oku kubonisa ukuba isilwanyana asinasiphumo kwisantya senhliziyo okanye uxinzelelo lwegazi xa lugqityiwe kwimizi enjalo.
5. Ukunyuka kweGlaucoma
Ngaphandle kweempembelelo ezikhuthazayo, i-Dimethylamylamine nayo ibangela ukunyanzelwa kwemithambo yegazi. Ukuhlanganiswa kwezi ziphumo ezimbini kunokukhokelela ekunyuseni kweentlobo ezithile ze-glaucoma. Ngoko ke, kucetyiswa ukuba ugweme ukuthabatha iziyobisi ukuba unayo i-glaucoma.
Kwakhona kukho iingxelo ezichaziweyo malunga nokulimala kwesibindi ngenxa yesitya sokusetyenziswa kwe-DMAA. Kwiminyaka emihlanu edlulileyo, abantu be-36 ababethathe i-OxyELITE Pro, isongezelelo sokutya kunye ne-DMAA njengesithako, bafumanisa ukuba banobungozi besibindi. Esinye sezigulane safa ngoxa abanye babini baphumelela ukusinda emva kokufakelwa kwesibindi.
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba zonke izigulane ze-36 zithatha i-dose ephakanyisiweyo yokuncedisa kodwa i-27 yazo yayithatha inguqulo ye-DMAA yokuncedisa. Ngako oko, akulula ukuseka isakhi esiyingozi kwisongezelelo.
7. Ukuqhaqha kweBrain
Ukusetyenziswa kwe-DMAA kuye kwaxhunyaniswa nokukhupha ubuchopho. Enyanisweni, iziganeko ezintathu zabantu abaye baphila ngeengqondo emva kokusebenzisa i-DMAA ziye zabikwa. Nangona kunjalo, kuye kwacaciswa ukuba amaxhoba aye asetyenzise leziyobisi ngotywala okanye i-caffeine rhoqo.
Kwesinye seziganeko, umntu onempilo wathabatha umthamo ophakanyisiweyo wesongezelelo sokutya oqukethe iDethylamlamlamine kwaye emva koko, waqala ukufumana intloko ebuhlungu elandelwa yintsholongwane yegazi.
8. Ukuhlaselwa yintliziyo
Kukho imeko echazwe kwindoda eneminyaka eyi-22 enempilo eyenza i-heart attack emva kokusebenzisa i-Jack3d, isongezelelo sokutya esiqukethe i-DMAA kunye ne-cafeine kwiiveki ezintathu.
9. Isihlunu kunye nokuvuthwa
Uphononongo olulodwa oluhlolisisa iziphumo ezichaphazelekayo lwe-DMAA lubonise ukuba i-15% yabantu be-56 ababethathe izongezo eziqulethe izidakamizwa (i-OxyElite Pro) zihlanza kunye nesisulu sengxaki emva kokuba zithathe izibonelelo. Nangona kunjalo, kwakubakho ubungqina obubonise ukuba ngaba yi-DMAA ekuncediseni okubangela ukuba i-nudea kunye nokuhlanza okanye ezinye izithako zinoxanduva.
10. Ubuthathaka bexeshana
Impembelelo yecala echaphazelekayo ehambelana nokusetyenziswa kwe-DMAA kukulahleka kwamandla ('crash') malunga neeyure ezimbalwa emva kokuthatha iziyobisi. Nangona kunjalo, akuyena wonke umntu osebenzisa amava echiza kule mpembelelo.
Ezinye iziphumo ezichaphazelekayo ze-DMAA ziquka:
Ukufa (nangona kunqabile)
Lezo zizinye zeziphumo ezichaphazelekayo ze-DMAA. Nangona kunjalo, akukho zifundo ezihlalutya kuphela iziphumo zecala leziyobisi. Ininzi yezifundo malunga nefuthe leziyobisi zibandakanya izongezelelo zokutya kunye ne-DMAA njengenye yezithako zabo kunokuba isilwanyana sodwa. Ukuqwalasela ukuba imilinganiselo echanekileyo yesilwanyana kwizongezelelo ayifakwanga, akukho nto ichanekileyo ekugqibeleni ukuba iziphumo zecala zibangelwa yi-DMAA. Ezinye izithako kwizibonelelo zingabangela ukuba kube nemiphumo emibi.
Ngaphandle koko, kwezinye iimeko, iziphumo ezimbi zibangelwa ukusetyenziswa kakubi kweemveliso ezisekelwe kwi-DMAA. Abanye abasebenzisi abaye bafumana ezi ziphumo zecala baxelelwe ukuba bathathe u-1,000 mg nsuku zonke. Kwiimeko ezinjalo, iimpembelelo zingagwenywa ukuba umntu unamathele kwisilinganiselo esifanelekileyo. Siza kuthetha malunga ne-DMAA efanelekileyo ngexesha elifutshane.
Ngaphandle koko, i-1, i-3 i-Dimethylamylamine ifumaneke kakhulu kwimpembelelo ye-nervous system xa isetyenziselwa kunye nee-CNS ezikhuthaza okanye i-nootropiki ezichaphazela iinkqubo ze-adrenergic. Oku kungakhokelela kwimiphumo eyahlukeneyo. Ngoko ke, ukuba ufuna ukuphephekisa imiphumo, qiniseka ukuba awuhlanganisi i-DMAA kunye nezikhuthazo okanye i-nootropic.
Kwakhona, kucetyiswa ukuba izongezelelo ze-DMAA akufanele zisetyenziswe imihla ngemihla. Ngoko, yiyiphi imilinganiselo efanelekileyo yeDethylamlamlamine?
Idemedi ye-dimethylamylamine efanelekileyo ixhomekeka kwiimeko ezahlukeneyo ezifana nobudala kunye nesimo sempilo yomsebenzisi, phakathi kwezinye iimeko. Nangona kunjalo, ngoku, akukho nolwazi olwaneleyo lwenzululwazi olunokuthenjwa ekumiseni umlinganiselo ofanelekileyo weyeza.
Ukuba uthe uthenge umkhiqizo we-DMAA we-fat / weight loss, qiniseka ukuba ufunde kwaye ulandele umyalelo wokusetyenziswa kwileyibhile yayo kwaye ubonane nodokotela wakho, umsemistim okanye nayiphi na enye ingcali ehloniphekileyo yezempilo ngaphambi kokuba uyisebenzise.
Ngokuqhelekileyo, isamba sokuqala se-DMAA ukusuka kwi-10 mg ukuya kwi-20mg. Okanye u-½ ukhonza umkhiqizo obandakanyekayo we-DMAA ozikhethile. Oku kuya kukunceda ubone kwaye uzive njani ukuba isilwanyana sinokukuchaphazela njani ukuba uyithatha kwi dose epheleleyo.
Njengoko ixesha lihamba, unako ukwandisa umthamo kwi-40 okanye kwi-60 mg ngosuku. Nangona kunjalo, abukho ubungqina obunyaniso obuxhasa ii-dose.
Ziyabonakala zibe yimilinganiselo emiselweyo yeemveliso eziqukethe i-dimethylamylamine. Iimpawu eziphuma kwiziphakamiso zokusetyenziswa ezinikezwa ngabavelisi be-DMAA ezongezelelweyo kwiimarike ngoku.
Akufanele usebenzise imveliso ye-DMAA imihla ngemihla ukuba ufuna ukufezekisa iziphumo ezilungileyo. Ininzi ye-DMAA izongezelelo ziwadla ezi zihlandlo ezimbini ukuya kwesithathu ngeveki ezininzi. Ngokusebenzisa izongezelelo ngexesha elinjalo, ulawula ngokulula ukukhusela ukuxhomekeke kwimveliso.
Ngokukhethekileyo, sebenzisa iipilisi ze-DMAA xa ufuna amandla okanye ugxininiso okanye malunga nemizuzu eyi-30 ngaphambi kokuba usebenze ngokomzimba. Ngokwenza njalo, uya kuba nokuphepha ezinye zangaphambili iimpembelelo zomsebenzi wokuncedisa.
I-4 ephezulu yehlabathi ye-XNUMX yokuthengiswa kwezidakamizwa
Kukho izidakamizwa ezahlukahlukeneyo ezinceda ukulahlekelwa yintlungu ngokunciphisa ukukhanga, ukunyusa umzimba kunye nokugcinwa kwesondlo esifanelekileyo. Izidakamizwa ezivuthayo ezinokutsha ziyakwenza ukuba umntu akhulise amandla okufunda ngokunyusa amandla akhe kunye nokugxila.
Itheyibhile elandelayo ibonisa iindawo ezine ezidumileyo zokuthengisa izidakamizwa emhlabeni wonke.
Igama leziyobisi kunye neNombolo yeCAS Isebenza njani
I-Synephrine powder -CAS: 94-07-5 I-Synephrine powder yi-beta-agonist esebenza ngokunyusa izinga lomzimba lomzimba, ukusetyenziswa kweekhalori namanqanaba emandla
I-1,3-dimethylamylamine (i-DMAA powder) - I-CAS 13803-74-2 Ngendlela yokwenza imichiza efana neye-Efdrine, i-1,3-dimethylamylamine yintsebenziswano enesistim esisetyenzisiweyo njengesithako esikhulu kwisondlo sokuncedisa ukunyusa ukuphucula ukusebenza kwezemidlalo kunye nokukhuthaza amandla.
I-Clenbuterol hydrochloride-CAS 21898-19-1 Ngaphandle kokuba unamandla amakhulu okutshisa amafutha, i-Clenbuterol hydrochloride nayo inefuthe elibonakalayo le-thermogenic ngokunyusa uxinzelelo lwegazi nokukhuthaza intliziyo ukuba isebenze nzima.
Ngaphandle koko, kubangelwa i-glycogen ukuphazamiseka, ngoko kukutsha kwamanqatha omzimba.
I-Salbutamol (i-Albuterol) - I-CAS 18559-94-9 I-salbuterol powder yayisetyenziswe ekuqaleni ngabantu abane-asthma okanye isifo esingapheliyo sesiphene sokuphucula ukuphefumula. Nangona kunjalo, namhlanje, isicatshulwa sisetyenziswe ngokukhawuleza ekukhuthazeni ukulahlekelwa kwintlawulo ngokukhawuleza, ukwenzela ukugcinwa kwemisipha ngexesha lolawulo lokulahleka kwamafutha kwakunye nokunyamezela ukunyamezela xa umntu eqhuba ukulahlekelwa kwezinto ezilahlekileyo.
Ukuba ufuna ukuthenga i-dmaa okanye nayiphi na yezi zidakamizwa ezishushu ngentla, unokwenza oko kungenakho ukuphazamiseka kwi-AASraw, com.
I-1, i-3-dimethylamylamine inikezela ngeenzuzo ezininzi kuquka ukunceda ekuphuculeni imemori yexesha elifutshane kunye nesenzo sokuxubusha kunye nokwakhiwa komzimba nokutshiswa kwamafutha omzimba. Nangona kunjalo, kufuneka uqinisekise ukuba udibana nomniki-nkonzo ohloniphekileyo kwaye unamathele kumlinganiselo wokunciphisa umonakalo ochaphazelekayo onjengegazi eliphezulu, imiba yeentliziyo kunye nokulimala kweentso, phakathi kwezinye iingozi zempilo ezihambelanayo.
Nangona kunjalo, ukunamathela kwisilinganisi esifanelekileyo akusisiqinisekiso sokuba awuyi kuba nemiphumo emibi. Kwakhona, kubalulekile ukuba kuqaphele ukuba akukho bungqina bobunzululwazi obudibanisa nale miphumo ngqo kwi-DMAA kuphela; oko kukuthi, ngokungabikho kwamanye izithako ezongezelelweyo.
I-Bloomer RJ1, Farney TM, i-Harvey IC, i-Alleman RJ - Iprogram yokukhusela ye-caffeine kunye ne-1,3-dimethylamylamine ukuxhaswa kwamadoda aphilileyo - Hum Exp Toxicol. 2013 Nov; 32 (11): 1126-36. i-doi: 10.1177 / 0960327113475680. Epub 2013 Feb 19.
ISchilling BK (1), iHammond KG, i-Bloomer RJ, i-Presley CS, i-Yates CR. - Impembelelo yePhysiological kunye ne-pharmacokinetic yomlomo we-1,3-dimethylamylamine ukulawulwa kwamadoda - i-BMC Pharmacol Toxicol. 2013 Oct 4; 14: 52. I-doi: 10.1186 / 2050-6511-14-52.
"1,3-Dimethylamylamine," Examine.com, epapashwe ngo-24 Aprili 2014, iphelileyo ihlaziywe nge- 14 Juni 2018,
Vorce SP, et al. I-Dimethylamylamine: isilwanyana esibangela ukuba i-immunoassay iphumelele kwiziphumo ze-amphetamines. J. (2011)
UGee P, uJackson S, Easton J. Enye ipilisi enobuhlungu: ityala lokutshatyalaliswa kwi-DMAA yeepilisi zephathi. NZ Med J. (2010)
I-Merck Index: I-Encyclopedia yeMichiza, iDrigs, ne-Biologicals (iNcwadi).
Lisi A, et al. Izifundo ze-methylhexaneamine kwi-oil andgeranium. I-Analysis Test Anal. (2011)
I-Bloomer RJ, et al. Iimpembelelo ze-1,3-dimethylamylamine kunye ne-caffeine yedwa okanye ngokudibeneyo kwisantya senhliziyo kunye noxinzelelo lwegazi kumadoda nabasetyhini abasempilweni. Phys Sportsmed. (2011)
Uhlolo olusisiseko olunzulu lwe-Testosterone Cypionate I-10 ye-testosterone ester ephezulu: yintoni efanelekileyo kuwe?